ဥပစာစကားထက်ကျော်လွန်သောလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောလူ့ပစ်မှတ်များနှင့်အရာဝတ္ထုများသို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း (Your Brain On Porn)
သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ volume 9, ဆောင်းပါးနံပါတ်: 6699 (2019)
Objectification - တစ်တစ်ခုခုတစ်ဦးတစ်စုံတစ်ဦးကိုလျှော့ချ - ငါတို့သည်မြင်လျက်အခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံနိုင်သည့်အတွက်အစွမ်းထက်နှင့်အလားအလာထိခိုက်လမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အမျိုးသမီးများမကြာခဏအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်အချို့သောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှော့ချနေပါတယ်အခါတိုင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း objectification ၏လုပ်ငန်းစဉ်များ၏သားကောင်များဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ objectified တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးအရာဝတ္ထုဖြစ်လာရာမှအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မကြာခဏတင်ဆက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလူ့လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကွာခဏပေးအပ်ကျား-လိုက်ဖက်အရုပ်ကဲ့သို့အရာဝတ္ထုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်သုံးစမ်းသပ်ချက်, သင်တန်းသားများကို '' အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်း oddball ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်းတိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆိုပါခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအရုပ်ကဲ့သို့အရာဝတ္ထုပိုသူတို့ကအကြိမ်ကြိမ်, လူ့လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာယင်း oddball အကျိုးသက်ရောက်မှု) မှကွဲပြားခြားနားသောရိပ်မိခဲ့ကြတဲ့နှောင်းပိုင်းကအဖြစ်အပျက်-related neurophysiological တုံ့ပြန်မှု (P300) ဖြစ်ပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်, oddball အကျိုးသက်ရောက်မှု objectified ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ objectified မိန်းမတို့အဘို့သိသိသာသာသေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု2၏ရလဒ်များသည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးများ၏ objectified ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမှချုပ်ထားခဲ့တာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု3ခုနှစ်တွင်လူ့-object ကိုသွေးခွဲရန်မ semantic ညွှန်းဆိုပေးခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့် objectified အမျိုးသမီးတွေနေဆဲအစစ်အမှန်တ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူရိပ်မိခဲ့သည်။ အတူတူယူ, ဤရလာဒ်များအမြိုးသမီးမြား၏အမြင်သည်ဥပစာ ကျော်လွန်. အနှစ်သာရအတွက် objectified အခါ, အပြောင်းအလဲများကိုကွောငျးတငျပွဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။
လူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ interaction ကပုံမှန်အားဖြင့်အခြားလူများရဲ့အတှေး, စိတ်နေသဘောထား, အလိုဆန္ဒများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုသိရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ interaction ကအစား, အများအားဖြင့်၎င်းတို့၏အသုံးဝင်မှုနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။ သီးခြားဦးနှောက်ဒေသများ Non-လူ့လှုံ့ဆော်မှု vs. လူ့များ၏ပီပီ subserve အဖြစ်ဒါတွေကပုံမှန်အပြန်အလှန်ပုံစံများပုံမှန်အားရှင်းလင်းစွာကွဲပြားကြသည်1။ လူ့-object ကိုသွေးခွဲလည်းညှိုးနွမ်းစေရန်လေ့လာသောအခါတုန်းပဲ, သာဓကရှိပါတယ်။ လူတွေသည်အခြားလူသားတွေ objectify သောအခါဤတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာအခါတိုင်း Objectification တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အမှု၌, ဒီတစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့သူမ၏ကိုယ်စားပြုနိုင်စွမ်းဖြစ်လျှင်အဖြစ်မှတ်, ပုံမှန်အားဖြင့်သူမ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကနေကွဲကွာသည်အဘယ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများမျှသာတူရိယာအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်2,3။ objectified သည့်အခါဖွစျသောကွောငျ့အများကြီးအများအားဖြင့်၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်သို့မဟုတ်အသုံးဝင်မှုများအတွက်တန်ဖိုးဖြစ်ကြောင်းအရာဝတ္ထုလိုပဲ, အမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဆာပတန်ဖိုးကိုများအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်နေကြတယ်။ အဘယ်အရာကိုမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ objectified အမျိုးသမီးတွေအရာဝတ္ထုအမှန်တကယ်အလားတူဖြစ်လာရှိမရှိဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္တုကိုကိုးကားမျှသာဥပစာရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပျံ့နှံ့နှင့်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်ပစ်မှတ်ထား။ မကြာသေးခင်ကသြစတြေးလျလေ့လာမှုမှာ4လူငယ်အမျိုးသမီးတွေသည်အခြားတစ်ရက်တစ်ဦး objectifying ဖြစ်ရပ် (ဥပမာမလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်, catcalling, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေ, စမျးတဝါးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအရာ) ကိုခံယူခြင်းနှင့်, မီဒီယာမှတဆင့်များနှင့်လူ့ interaction ကရော, ထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပိုပြီးတခြားသူတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification သက်သေခံရန်အစီရင်ခံတင်ပြ နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်ကြိမ်။ မီဒီယာအတွက်အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုကိုမကြာခဏ objectifying နှင့်ခဲအနောက်ကမ္ဘာ၏အများဆုံးပိုမိုအားပေးပုံရိပ်နှင့်အတူလျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်5,6။ ထိုသို့သောတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် objectifying အတွေ့အကြုံများအဆိုးအမြိုးသမီးမြားရဲ့ Self-အမြင်များ impact ကြောင့်အကျိုးဆက်များရှိ4,7,8 နှင့်ရေရှည်တွင်အလားအလာသူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာထိခိုက်9,10,11,12။ ထိုမှတပါး, အသုံးအနှုန်းများ objectifying အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သိမြင်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်တိုးပွါး13,14,15။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အခြေခံသောဖြစ်စဉ်များ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရတဲ့အစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။
objectification သုတေသနအတွက်အထီးခန္ဓာကိုယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လူမှုယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုစလုံးသီအိုရီအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ထားသည်ထက်အမျိုးသမီးအပေါ်တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့အာရုံ။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်မျိုးပွားမှုတနျဖိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုတွေကိုတစ်စပျစ်သီးပြွတ်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအာရုံကိုဆွဲဆောင်16,17။ လူမှုယဉ်ကျေးမှုသီအိုရီအစား, ကျပုံစံအခန်းကဏ္ဍများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ18 နှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အကဲဖြတ်စောင့်ရှောက်သောအကြောင်းတရားများအဖြစ်ရှေးဘိုးဘေးအဆင့်ဆင့်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်အပေါ်အခြေခံပြီး2,19။ အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အချို့သောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများမှသူတို့ကိုလျှော့ချ objectification ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခံရသူများမှာအဘယ်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးသီအိုရီအလားအလာရှင်းပြပါ။ ရလဒ်အဖြစ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အများကြီး object တစ်ခုကဲ့သို့ ပို. တန်ဖိုးထားသည်၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်၎င်း၏အသုံးဝင်မှုအဘို့ဖြစ်၏။
တစ်ခုခုမှတစ်စုံတစ်ဦးထံမှပြောင်းလဲမှုလူဇာတ်ဖျက်ခြင်းနှင့်နတ်ဘုရားအပေါ်သုတေသနအတွက်ပျေါခဲ့သ; ကဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေ outgroup အဖွဲ့ဝင်များနှင့် (စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်) အရာဝတ္ထုအလားတူဦးနှောက်ပုံစံများရူးနှမ်းပြထားပြီး20,21, နတ်ဘုရားအရာဝတ္ထုလူ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလားတူအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်စဉ်22,23,24,25။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဘုံအလားတူသုတေသနအားထုတ်မှုကောက်ယူခဲ့ကြသော်လည်းအဘယ်သူမျှကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ် objectified အမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောတ္ထုအကြားတူညီဆိုင်သောနေရာများတွင်ခွင့်ပြုပါပြီ။
လူဇာတ်ဖျက်ခြင်းပေါ်တွင်အလုပ်26,27,28,29 သူတို့ (ဆိုလိုသည်မှာ non-objectified) swim- သို့မဟုတ်အတွင်းခံအဝတ်အစားတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အတူရင်ဆိုင် (ဆိုလိုသည်မှာ objectified) သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်ကြသောအခါလူဖြစ်စေသောအသင်းအဖွဲ့များ, ဥပစာစကား, ဒါမှမဟုတ်ရိုအရည်အသွေးများပြသလျက်ရှိသည်။ Objectified အမျိုးသမီးတွေဒီထက်, နိုင်စွမ်းအောက်မေ့နှင့်ဖော်ရွေအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဝေါဟာရများ (ဥပမာ, သဘောသဘာဝ, သီး၌) နဲ့ပိုမိုလွယ်ကူစွာဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ဝတ်ဆင်ယောက်ျားနှင့်အပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်သောအမျိုးသမီးများကို scarcely နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤအရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူကိုသူတို့ objectified မိန်းမနှင့်ရင်ဆိုင်ကြသောအခါအောင်သော semantic အသင်းအဖွဲ့များ၏စိတ်ကူးတစ်ခုပေးနေချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသည်ဤမိန်းမတို့သည်အမှန်တကယ်တစ်ဦးသိမှုဆိုင်ရာအာရုံ level မှာတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူဖြစ်လာကြောင်းအခြမှခွင့်မပြုပါဘူး။
အလားတူခုနှစ်, neuroimaging ရလဒ်များကို30 အမြိုးသမီးမြားဆီသို့ဦးတည်ရန်လိုလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများနှင့်အတူယောက်ျားအခြားလူမှုရေးပစ်မှတ်နှိုင်းယှဉ် objectified အမျိုးသမီးများကိုကြည့်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုဦးနှောက်ဧရိယာ activation လျော့နည်းသွားပြဖော်ပြခဲ့တယ်။ အခွားသောသုတေသန objectified အမျိုးသမီးပစ်မှတ်ပုံမှန်အားတ္ထုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်များတွင်အသုံးပြုကြသည်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုပြီးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းနေကြသည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အရာဝတ္ထုပုံမှန်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပြောင်းအလဲနဲ့သုံးပြီးအသိအမှတ်ပြုကြသည်နေစဉ်, လူများနှင့်အထူးသဖြင့်လူ့မျက်နှာများ၏အသိအမှတ်ပြုမှု configuration process တဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာ inverted သောအခါတ္ထုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုထိခိုက်ဖြစ်နေဆဲနေချိန်မှာအဆုံးစွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်ဆံရေးများ၏အမြင်အပေါ်မူတည်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းပေးထား, လူများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်, inhibited ဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ31,32) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဘုံ, Bernard ဖို့ပြောင်းပြန်လှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားခြင်း et al.33 သူတို့ဖြောင့်မတ်ပြသသို့မဟုတ် inverted အခါတခြားလူ့ပစ်မှတ်မတူပဲမရှိခြားနားချက် objectified အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်များ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် objectified အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်, ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုစာမျက်နှာအဖြစ်ပုံမှန်အားအရာဝတ္ထုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသော piecemeal ဖြစ်စဉ်ကိုပြိုကွဲခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အချို့ဦးနှောက်ဧရိယာများဖေါ်ပြခြင်း30 သို့မဟုတ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်ကို33 အလားတူတ္ထုများနှင့် objectified အမျိုးသမီးတွေနှစ်ဦးစလုံးသွားမယ်လို့အခါ, သို့သော်သူတို့ကတကယ်တော့အတူတူပါပဲများမှာသို့မဟုတ်ပင်အလားတူဖြစ်လာကြောင်းအာမမခံပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ တဦးတည်းအဘို့ဖြစ်သောကြောင့်အချို့အခြေအနေများအောက်တွင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းပြန်လှန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြသထားပါပြီ31,34,35 လုပ်ငန်းစဉ်၏အမျိုးအစား (configuration vs. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) နှင့်ပစ်မှတ် (လူ့ vs. အရာဝတ္ထု) အကြားမျှစုံလင်သောထပ်တူရှိကွောငျးအဓိပ်ပာယျ။ ထိုမှတပါး, အရသာရှိတဲ့အစားအစာနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့အလှနျကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု, တူညီတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများ (ဆိုလိုသည်မှာအကျိုးကို system ကို activate လုပ်ဖို့လူသိများကြသည်36).
objectified အမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောတ္ထုများအကြားစစ်မှန်တဲ့တူညီမှန်း, တဦးတည်း (1) အရာဝတ္ထုနှင့် (2) နဲ့တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ပါစေတိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထုနှင့်လူ့လှုံ့ဆော်မှုများအကြားသိမှုဆိုင်ရာအာရုံတူညီအကဲဖြတ်ထားပါသည်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသုံးမယ့်အစားကိုယ့်အလားတူအပြောင်းအလဲနဲ့စတိုင်တိုင်း၏ရန် ။ ပထမဦးဆုံးအချက်စမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားမှုမကြာသေးမီကကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ N170, ပုံမှန်အား configuration process နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, သုတေသနသာ Non-objectified တွေ့ရှိခဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်) လူ့အလောင်းတွေ objectified (ဆိုလိုသည်မှာခဲဝတ်ဆင်) လူ့အလောင်းတွေနဲ့အရာဝတ္ထု (ဆိုလိုသည်မှာမတူပဲ Configuration လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် ယင်းလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေအလျင်အမြန်စေလွှတ်သောအခါဖိနပ်)37 သို့မဟုတ် inverted38။ အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှုအတွက်ပြောင်းပြန်လှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု Non-objectified မိန်းမတို့အဘို့, ဒါပေမယ့်မပေးအိမ်များနဲ့တူ objectified အမျိုးသမီးများနှင့်တ္ထုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်34။ ဒီလေ့လာမှုတွေမွေးစားအလားတူအပြောင်းအလဲနဲ့စတိုင်စမ်းသပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနေစဉ် objectified အမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောအရာဝတ္ထုများ၏ရုပ်ပုံများကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အခါမျှမကြိုးပမ်းမှုတိုက်ရိုက် objectified အမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောအရာဝတ္ထုနှစ်ခုလုံး၏အမြင်များတွင်တူညီစမ်းသပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ယခင်သုတေသနကို objectification ဖြစ်စဉ်များ objectified အမျိုးသမီးတွေအမှန်တကယ်ပိုပြီးအရာဝတ္ထု-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ထိုဥပစာကျော်လွန်သွားရကောက်ချက်ချဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်သူတို့ (မဟုတ်သော) objectified ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်အရာဝတ္ထုများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြသောအခါသင်တန်းသားများကို '' အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူ့အကြားစစ်မှန်တဲ့တူညီတိုင်းတာနဲ့လှုံ့ဆော်မှုကန့်ကွက်ခွင့်ပြုမယ့်ဝတ္ထုပါရာဒိုင်းမိတ်ဆက်ပေး။
အမြိုးသမီးမြားကိုအခွားလူ့ပစ်မှတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူရိပ်မိကြသည် objectified သောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့, သုံးစမ်းသပ်ချက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်မှာလူသိများတဲ့ oddball ပါရာဒိုင်း (ဥပမာမွေးစားခဲ့သည်39,40), အ oddball, ဆိုလိုသည်မှာထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု sequence ကိုကွာခဏတစ် deviant နှိုးဆွခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်သော။ အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERP) တစ်ခုတက်ကြွအခွအေနေနှင့် oddball နှင့်ထပ်တလဲလဲလှုံ့ဆော်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်မှုတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစတင်ခြင်းပြီးနောက် 300-250 ms န်းကျင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု related အလားအလာအစိတ်အပိုင်း - - ထို oddball နှိုးဆွဟာထပ်ခါတလဲလဲထံမှကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်ကိုရိပ်မိသောအတိုင်းအတာဖို့ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်၎င်း၏လွှဲခွင်တိုးခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေသည်ဒီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးသုတေသန P600 ကြောင်းပြသထားပါတယ် လှုံ့ဆော်မှု41,42။ စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်, Non-objectified နေစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း, (ဆိုလိုသည်မှာခဲဝတ်ဆင်) အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ် objectified ခဲ့ကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်) အမျိုးသမီးနှင့်အထီးပစ်မှတ်အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်မှု2အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်မှာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပစ်မှတ်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံအထူးသညျဤလေ့လာမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့ကြသည်နှိုင်းယှဉ်အရာဝတ္ထု (ဆိုလိုသည်မှာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံ) တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားအထီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားကွာခဏ objectified အထီးဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးစီးရီးအကြားတင်ပြသောအခါနှိုင်းယှဉ် objectified အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆအရ, P300 သိသိသာသာသေးငယ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ငါတို့ရှိသမျှကိုလှုံ့ဆော်မှု Non-objectified ပစ်မှတ်ပုံဖော်ကြောင်းပေးထား, စမ်းသပ်မှု2အတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့အလားတူခြားနားချက်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုယေဘုယျထဲမှာမအမျိုးသမီးတွေကြောင်းကိုပြသခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ်သာ objectified အမျိုးသမီးတွေတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူရိပ်မိနေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စမ်းသပ်မှု3အတွက်သာ objectified ပစ်မှတ်တင်ပြခဲ့ကြသည်, သို့သော်ယခင်စမ်းသပ်ချက်နဲ့မတူပဲ, ထိုအမျိုးအစားတာဝန်လူ့-object ကိုသွေးခွဲဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူသားမြားသညျသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအားလုံးကို semantic ရည်ညွှန်းဖျက်သိမ်းရေးကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအရာဝတ္ထုတစ်ခုမျှသာဥပစာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်တ္ထုနှင့်အတူစစ်မှန်သောတူညီသဘောဆောငျသောအယူအဆ corroborate ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
stimulus ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် Pre-စမ်းသပ်ခြင်း
82 ပုံတစ်ဦးကစုစုပေါင်းအင်တာနက်ပေါ်က်ဘ်ဆိုက်များကနေရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ယခင်သုတေသန (ဥပမာထဲမှာရှိသကဲ့သို့တူညီယူဆချက်နောက်တော်သို့လိုက်27,28) swim- သို့မဟုတ်အတွင်းခံထဲမှာပေါ်လာသူကိုယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ထို့ကြောင့် ပို. objectified ဖြစ်ကြောင်းတည်တံ့ခိုင်မြဲ။ အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို (ပုံဥပမာလှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့မြင်အတူတူမော်ဒယ်များစမ်းသပ်မှု 21 အတွက်အပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်စဉ်တွင်စီစမ်းသပ်မှု 20 နှင့် 1 အတွက် swim- သို့မဟုတ်အတွင်းခံထဲမှာပေါ်ထွန်း3အမျိုးသမီးများနှင့်2ယောက်ျားကိုယ်စားပြု 1,2နှင့် 3) ။ အားလုံးမော်ဒယ်များထဒူးကနေပုံဖော်နှင့်ဖြောင့်ကင်မရာသို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်မျက်နှာစကားရပ်ကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြသည်အတူမော်ဒယ်များ။ အားလုံးဓါတ်ပုံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့တောက်ပများကိုညီမျှစေရန် greyscale ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံများအတွက်တစ်ရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား (ဥပမာတွေ့မြင်မော်ဒယ် (30%) ၏မူရင်းမျက်နှာနှင့်တစ်ဦးရုပ်-မျက်နှာ (70%) အကြားတစ်ဦး morph ဖန်တီးခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမော်ဒယ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏မြင်နိုင်အသားအရေပေါ်မှာမျက်နှာပြင်မှုန်ဝါးလျှောက်ထားရယူခဲ့ပါသည် ကိန်းဂဏန်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှု 1,2နှင့် 3) ။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု 22 ပါဝင်သူ (12 အမျိုးသမီး) တစ်ဦးအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်စေအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံခွဲခြားထားတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာမှတဆင့် Pre-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ လူ့ရုပ်ပုံများနှင့်အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသီးသီးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအရာဝတ္ထု (နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင် 98% မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု) အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်နှစ်ဦးစလုံး။ အရေးကြီးပုံများကို၏အသိအမှတ်ပြုမှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုသူတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်လမ်း, ပစ်မှတ်၏ကျားမ, ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းသားများကို '' ကျား, မတစ်ဦး function ကိုအဖြစ်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ တူညီသောမေးခွန်းလွှာ၌၎င်း, သာလူ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့, အဘယ်အတိုင်းအတာအထိရုပ်ပုံတစ်ခု objectified ယောက်ျားမိန်းမပုံဖော်ဖို့ 7-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ညွှန်ပြမှသင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ ယခင်သုတေသနနှင့်အညီ27,28,30ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့ swim- သို့မဟုတ်အတွင်းခံအဝတ်အစား (ခုနှစ်တွင်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်သည့်အခါတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိ objectified ခံရဖို့တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏M = 3.05, SD = ၀.၃၇) သူတို့သည်အပြည့်အ ၀ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (M = 2.25, SD = 0.26), F(1, 20) = 13.27, p = 0.002, η2p = 0.40 ။ အရေးကြီးသည်မှာဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပစ်မှတ် (သို့) ပါ ၀ င်သူများ၏ကျား / မနှစ်မျိုးလုံးအားဖြင့်မပြုပြင်ခဲ့ (အပြည့်အ ၀ ဆန်းစစ်လေ့လာရန်အတွက်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးမှုကိုကြည့်ပါ) ။
လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှု 1 ၏ electrophysiological ရလဒ်များကို။ Left panel ကို: တစ်ဦး objectified လူ့အထီးတစ်ဦး objectified လူ့အမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများဥပမာ။ ဒီကိန်းဂဏန်းမှာပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုလက်ရှိစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုပေမယ့်မူရင်းဆင်တူမခံခဲ့ရပါ။ ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကျနော်တို့မူလစမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုထုတ်ဝေရန်လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲလှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်တဲ့စာရေးသူဆက်သွယ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် panel ကို: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်၌ ERP လှုပ်ရှားမှု၏ဦးရေပြားဖြန့်ဖြူး။ ညာဘက် panel က: objectified ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံအဘို့အရန်းပျမ်းမျှအား waveforms ။ ညာဘက်စက်ဝိုင်း: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုပစ်မှတ်အကြားခမ်းနားပျမ်းမျှအား waveforms အကြားနှိုင်းယှဉ်၏အသေးစိတ်။
လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှု2၏ electrophysiological ရလဒ်များကို။ Left panel က: non-objectified လူ့အထီး, non-objectified လူ့အမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများဥပမာ။ ဒီကိန်းဂဏန်းမှာပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုလက်ရှိစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုပေမယ့်မူရင်းဆင်တူမခံခဲ့ရပါ။ ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကျနော်တို့မူလစမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုထုတ်ဝေရန်လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲလှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်တဲ့စာရေးသူဆက်သွယ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် panel ကို: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်၌ ERP လှုပ်ရှားမှု၏ဦးရေပြားဖြန့်ဖြူး။ ညာဘက် panel က: Non-objectified ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံအဘို့အရန်းပျမ်းမျှအား waveforms ။ ညာဘက်စက်ဝိုင်း: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုပစ်မှတ်အကြားခမ်းနားပျမ်းမျှအား waveforms အကြားနှိုင်းယှဉ်၏အသေးစိတ်။
လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှု3၏ electrophysiological ရလဒ်များကို။ Left panel ကို: တစ်ဦး objectified လူ့အထီးတစ်ဦး objectified လူ့အမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများဥပမာ။ အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ပုံလိုင်းများညာဘက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ဘယ်ဖက်ခြမ်းတွင်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းမှာပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုလက်ရှိစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုပေမယ့်မူရင်းဆင်တူမခံခဲ့ရပါ။ ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကျနော်တို့မူလစမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုထုတ်ဝေရန်လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲလှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်တဲ့စာရေးသူဆက်သွယ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် panel ကို: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်၌ ERP လှုပ်ရှားမှု၏ဦးရေပြားဖြန့်ဖြူး။ ညာဘက် panel က: objectified ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံအဘို့အရန်းပျမ်းမျှအား waveforms ။ ညာဘက်စက်ဝိုင်း: အ P300 အချိန်ပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုပစ်မှတ်အကြားခမ်းနားပျမ်းမျှအား waveforms အကြားနှိုင်းယှဉ်၏အသေးစိတ်။
စမ်းသပ်မှု 1 ခုနှစ်, oddball ပါရာဒိုင်း objectified အမျိုးသမီးနှင့်အထီးပစ်မှတ်ပါဝင်သည်; အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုမကြာခဏ objectified လူ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုခင်းကျင်းအတွင်းထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလှုံ့ဆော်မှုရောင်ပြန်ဟပ်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပစ်မှတ်တစ်ခု key ကိုဖိထားပါအားဖွငျ့လူသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအရာဝတ္ထုကဲ့သို့ကိုယ်ပွားပုံဖော်ဖြစ်စေ, အဖြစ်တိကျစွာ, ညွှန်ပြခဲ့ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှမြန်ဆန်စွာ။
တိကျမှန်ကန်မှု။ မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအစား၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုကောင်းတဲ့အထီးခွဲခြားဖို့ယေဘုယျသဘောထက်အမျိုးသမီးပစ်မှတ် (ပြသF(1, 17) = 9.939, p <0.01, η2p = 0.369) နှင့်အရုပ်ကဲ့သို့သော avatars ထက်လူ့ objectified (F(1, 17) = 62.438, p <0.001, η2p = 0.786) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျား၊ မရေးရာ ဦး တည်ချက်သည်သိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်F(1, 17) = 7.774, p <0.05, η2p = 0.314) ။ သင်တန်းသားများသည်အရုပ်နှင့်တူသောအထီး (M = ၈၄.၇၇၊ SD = ၉.၃၅၁) သည်အရုပ်ကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးကြောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုတိကျသည် (M = 84.77, SD = 9.351) (t (79.22) = -9.890, p <17) ။ objectified အမျိုးသမီးနှင့် objectified အထီးပစ်မှတ် (t (3.104) = -0.01, p = 17) အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပေါ်ထွက်လာ (ပုံကိုကြည့်ပါ။ SI1 ) ကိုနောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပြန်ကြားရေး၌တည်၏။ ဒါကအရုပ်ကဲ့သို့အမျိုးသမီးကိုယ်ပွား objectified အထီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားနေသေးတယ်တဲ့အရုပ်ကဲ့သို့အထီးကိုယ်ပွားနှိုင်းယှဉ် objectified အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားထင်ရှားပေါ်ထွန်းလာသောအခါသင်တန်းသားများကို '' မှန်ကန်သောအသိအမှတ်ပြုမှုသိသိသာသာချို့ယွင်းခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
တုံ့ပြန်မှုအချိန်။ တိကျမှန်ကန်တုံ့ပြန်မှုပေးရန်လိုအပ်အချိန်သိသိသာသာ (ပစ်မှတ်ကျားကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်F(1, 17) = 23.796, p <0.001, η2p = 0.583) နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် (F(1, 17) = 11.248, p <0.01, η2p = 0.398), ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံး variable တွေကိုအကြားအပြန်အလှန်လွှမ်းမိုးမှုမခံခဲ့ရပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်တုန့်ပြန်ချက်ရှိသောလူသားများထက် M эркများ (M = 0.694 s, SD = 0.14) ထက်အမျိုးသားများအမျိုးအစား (M = 0.789 s, SD = 0.20) နှင့်သတ်မှတ်ထားသောလူသားများအတွက် (M = 0.771 s, SD = 0.17) ထက်ပိုမိုမြန်သည်။ အရုပ်လို avatars (M = 0.772 s, SD = 0.17) (ပုံကိုကြည့်ပါ။ SI2 ) ကိုနောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပြန်ကြားရေး၌တည်၏။ ဒါဟာသင်တန်းသားများကို '' တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘဲမကြာခဏလှုံ့ဆော်မှုထက်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောဆီသို့အာရုံချို့ယွင်းခဲ့မှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမတူဘဲသူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အထီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီး (လူ့ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပွားနှစ်ဦးစလုံး) အားတုံ့ပြန်မှာနှေးကွေးခဲ့သညျ။ ယခင်သုတေသနအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နှင့်ယောက်ျား၏ရုပ်ပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်အချိန်ကြာကြာကာလအဘို့အကြည့်နေကြသည်ကိုပြသထားပါတယ်43။ ဤသည်အမျိုးသမီးထက်အထီးလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုနှေးကွေးခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဤရလဒ်သို့သော်ကျနော်တို့ကအောက်ပါစမ်းသပ်ချက်၌ဤအကျိုးသက်ရောက်ပုံတူပွားကြဘူးအဖြစ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူအနက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (P300) ၏လွှဲခွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျိုးစီးပွား (parietal, occipital နှင့်ဗဟိုက်ဘ်ဆိုက်များ) ၏အားလုံးသုံးဒေသများတွင်ပစ်မှတ်ကျား, မများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း objectified အမျိုးသမီးလူ့ဓာတ်ပုံများကိုအကြားအမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား၏တင်ဆက်မှု objectified အထီးဓာတ်ပုံများကိုအကြားအထီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား၏တင်ပြချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာစွာသေးငယ်သော P300 တစ်ဦးအပြုသဘောတွန်းမြင့်တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ပုံကိုကြည့်ပါတစ်ခု objectified ယောက်ျားနှင့် objectified အမျိုးသမီးပစ်မှတ်ပုံဖော်ဓာတ်ပုံများကိုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် 1) ။ အားလုံးဒေသများမှာတော့ပစ်မှတ်ကျား, မများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အကြားအပြန်အလှန် (သိသိသာသာပေါ်ထွက်လာF(1, 17) = 21.786, p <0.001, η2p = 0.562; F(1, 17) = 17.791, p = 0.001, η2p = 0.511; F(1, 17) = 16.573, p = 0.001, η2p အသီးသီး occipital, parietal နှင့်အလယ်ပိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များများအတွက် = 0.494, အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးပေး) ကိုကြည့်ပါ။
ရလဒ်အမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားအထီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားကွာခဏ objectified အထီးဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးစီးရီးအကြားတင်ပြသောအခါနှိုင်းယှဉ် objectified အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားပုံပေါ်သည့်အခါ P300 သိသိသာသာသေးငယ်သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလှုံ့ဆော်မှုသိမှုဆိုင်ရာအာရုံဟာမကြာခဏသူမြားကှာခွားသညျ့ဖို့ oddball လှုံ့ဆော်မှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတိုင်းအတာ: အ oddball ပါရာဒိုင်းအတွက် P300 ၏လွှဲခွင်နှစ်ခုအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအချက်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပေးထားသောဤရလဒ်များကို objectified အမျိုးသမီးလူ့လှုံ့ဆော်မှုအထီး counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ်အစစ်အမှန်တ္ထုကိုပိုမိုအလားတူအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုနှုန်း se objectified အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ကြောင်းပိုမိုယေဘုယျကျားမသက်ရောက်ထင်ဟပ်ကြောင်း, သို့သော်တတ်နိုင်သမျှနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေထုတ်ပယ်ဖို့ကျနော်တို့အပြည့်အဝ-ကိုဝတ်လျက်, Non-objectified ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရုပ်ပုံများနှင့်အတူဒုတိယစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု2၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုတဆင်တူခဲ့သည်။ ဤတွင်အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်) အတူတူသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပစ်မှတ် Non-objectified ပုံဖော်။
တိကျမှန်ကန်မှု။ သင်တန်းသားများကို '' တိကျမှန်ကန်မှုကိုသာ (ပစ်မှတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်F(1, 17) = 35.679, p <0.001, η2p = 0.677) ကြောင်း Non- objectified လူသားမြားသညျ (M = 95.58, SD = 9.95) အရုပ်ကဲ့သို့သော avatars များထက်ပိုမိုတိကျစွာအမျိုးအစားခွဲခဲ့သည် (M = 83.19, SD = 9.63) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ချက် ၁ နှင့်မတူသည်မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှကျား၊ မနှင့်လူသားများ၏အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ SI3 ) ကိုနောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပြန်ကြားရေး၌တည်၏။
တုံ့ပြန်မှုအချိန်။ မတူညီသောလှုံ့ဆော်မှု categorizing အတွက်သုံးစွဲအချိန်ကိုမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ပုံကိုကြည့်ပါရှိခဲ့သည်။ SI4 ) ကိုနောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပြန်ကြားရေး၌တည်၏။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်တစ်ချိန်တည်းပြတင်းပေါက်အကျိုးစီးပွားချင်းစီဒေသတွင်း၌ယုတ်လွှဲခွင် extract မှမွေးစားခဲ့သည်။ ရလဒ်များကျားများနှင့်အတိုးများတစ်ဦးချင်းစီဒေသမှာရှိတဲ့ပစ်မှတ်၏လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် (အားလုံးအကြားမျှအပြန်အလှန်ထင်ရှား Fs <1) ။ အရေးကြီးသည်မှာ ROI တစ်ခုချင်းစီတွင်ထူးဆန်းသောသက်ရောက်မှုသည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိသောလူ့ပစ်မှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုသဘောဆောင်သောလှိုင်းကိုထုတ်ပေးသည့်အရံခုံးကဲ့သို့သော avatars နှင့်အတူ ROI တစ်ခုစီတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ps <0.001) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ P300 ၏ amplitude သည်အထီးပစ်မှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သိသိသာသာကြီးမားသော်လည်း၊ps <0.05; ပုံကိုကြည့်ပါ 2; ) အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အွန်လိုင်းပြန်ကြားရေးပံ့ပိုးကြည့်ပါ။
စမ်းသပ်မှု2၏ရလဒ်များအမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားရသောအခါအထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Non-objectified အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားပုံပေါ်သည့်အခါ P300 သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းထောက်ပံ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဓါတ်ပုံတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအသိသာနှင့်တန်းတူခိုင်မာတဲ့ oddball သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား Non-objectified အထီးဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးစီးရီးအကြားပေးအပ်သည်။ သည်အခြားအသုံးအနှုန်းများခုနှစ်တွင်အခါအမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအပြည့်အဝဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနှင့်သူတို့ objectified နှင့်၎င်းတို့၏အထီး counterparts တွေကိုအဖြစ်အမှန်တကယ်အရာဝတ္ထုကနေတူညီစွာကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံကိုမြင်ကြသည်မဟုတ်သူတို့၏အလောင်းများကိုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြသည်မဟုတ်။
တိုက်ရိုက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်၏ non-objectified ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနှင့်အတူ objectified နှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုက်ရိုက်နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များနှိုင်းယှဉ်ရလဒ်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ်မှတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ပစ်မှတ်ကျားနှင့် objectification သူတို့ရဲ့အဆင့်ကို (အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်မှုF(1, 34) = 9.125, p = 0.005, η2p = 0.21; F(1, 34) = 11.252, p = 0.002, η2p = 0.249; F(1, 34) = 11.526, p = 0.002, η2p = ၀.၂၃၃ သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း၊ parietal နှင့်ဗဟိုဆိုဒ်များအသီးသီးအတွက်ဖြစ်သည်။ ) အမျိုးသမီးများ၏ပစ်မှတ်များကိုသာအခြားလူ့ရည်မှန်းချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတကယ့်အရာဝတ္ထုများနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများမဟုတ်ဘဲသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးသမီးများကိုသာအရာဝတ္ထုများနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်။
အရာဝတ္ထုဂုဏ်ထူး - စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2ခုနှစ်တွင်အမျိုးအစားတာဝန်အမြဲတမ်းလူ့ဖို့ဝေါဟာရအသုံးအနှုံးဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာဝတ္ထုအတိုင်းအတာသက်ဆိုင်ရာ Task မဟုတ်ပါ - ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တတိယစမ်းသပ်မှုလူ့တောင်မှအခါ, objectified အမျိုးသမီးတွေတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းပြသရန်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သည့် semantic ရည်ညွှန်းဖျက်သိမ်းရေးကို "မိန်းမအရာဝတ္ထု" မျှသာဥပစာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သူမတစ်ဦးသင့်လျော်သောအရာဝတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူရိပ်မိကြောင်းပြသရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်မှု3များတွင်ပါဝင်သူညာဘက်ဒါမှမဟုတ်ပစ်မှတ်၏လက်ဝဲဘက်မှာဖြစ်စေသည်ထင်ရှားတဲ့အရောင်ပုံလိုင်းများ၏အခြေခံပေါ်မှာဓါတ်ပုံတွေကိုခွဲခြားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် (ပုံကိုကြည့်ပါ 3) ။ အရောင် variable ကိုလေးနှိုးဆွလုပ်ကွက်များတွင်ရလဒ်ပစ်မှတ်၏ကျားမအတူဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမကြာခဏပုံလိုင်းအရောင်ဟာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအဝါရောင်သို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျခဲ့, အစိမ်းခဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာတော့လျှင်။ စမ်းသပ်မှု 1 များ၏လှုံ့ဆော်မှုလူ့လှုံ့ဆော်မှုဟာမကြာခဏအရောင်နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြစဉ်အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုအမြဲတမ်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအရောင်နဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြ (အသေးစိတ်ကိုနည်းလမ်းများအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ဆိတ်ကွယ်ရာအချို့ဖမ်းစမ်းသပ်မှုတွေ မှစ. , ပုံလိုင်းထည့်သွင်းအဆင်ပြေအောင်နှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာသင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကို၎င်းကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်သက်ရောက်မှုသင်တန်းသားများကို '' အသိအမြင်ပြင်ပဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်လူ့လှုံ့ဆော်မှုကြားတွင်သည်ထင်ရှားကြောင်းသတိပြုမိကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးဟာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ဒေတာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပါသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်၏ကျားမတို့ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမခံရ (သင်္ဘောသဖန်းသီးကိုတွေ့မြင် SI5 နှင့် SI6 ) ကိုနောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပြန်ကြားရေး၌တည်၏။
အဆိုပါ P300 ၏လွှဲခွင်ကိုသာ occipital ဧရိယာနှင့်နောက်ပိုင်းအချိန် window ထဲတွင်ပစ်မှတ်ကျား, မများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း objectified အမျိုးသမီးလူ့ဓာတ်ပုံများကိုအကြားအမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား၏တင်ဆက်မှု objectified အထီးဓါတ်ပုံတွေကို (အကြားအထီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွား၏တင်ပြချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာစွာသေးငယ်သော P300 တစ်ဦးအပြုသဘောတွန်းမြင့်တက်ပေးခဲ့တယ်F(1, 19) = 10.25, p = 0.005, η2p = 0.35) ။ ဒီရလဒ်ကတော့အရုပ်လို avatars တွေဟာအရုပ်လို avatars တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ activation ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ t(19) = 3.56, p = 0.002, d = ၁.၆၃၊ လူ့ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမပစ်မှတ်များအကြားသိသာသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခဲ့သော်လည်း t(19) = 0.080, p = 0.94, d = 0.04 ။ ထို့အပြင်ရည်ညွှန်းထားသောလူ့အထီးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရုပ်တူသောအရုပ်သည်သိသိသာသာအပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ t(19) = -3.63, p = 0.002, d = -1.67, objectified အမျိုးသမီးရုပ်ပုံများနှင့်၎င်းတို့၏အရုပ်ကဲ့သို့သော avatars အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်စဉ် t(19) = -0.380, p = 0.708, d = -0.17 (ပုံကိုကြည့်ပါ 3; ) အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အွန်လိုင်းပြန်ကြားရေးပံ့ပိုးကြည့်ပါ။
အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခု "ဟုသူမက" တစ်ဦးက "" သောအခါ objectified? ဖြစ်လာပါဘူး တစ်ဦးမျှသာဥပစာ objects သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများ objectification အစစ်အမှန်တ္ထုနှင့်အတူစစ်မှန်သောတူညီဖော်ပြပါဘူးအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်ရှိပါသလား? objectified အမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောနှိုင်းယှဉ်အရာဝတ္ထုသွားမယ်လို့သည့်အခါဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်, လက်ရှိသုတေသနတိုက်ရိုက်သင်တန်းသားများကို '' အာရုံကြောပုံစံများအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ရလဒ်များ objectified အမျိုးသမီးတွေအစစ်အမှန်တ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူရိပ်မိနေကြကြောင်းပြသပါ။ စမ်းသပ်မှု 1 ၏ရလဒ်များကိုဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးများ၏ objectified ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမှချုပ်ထားကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်စဉ်စမ်းသပ်မှု 2, objectified အထီးပစ်မှတ်နှင့်အတူ objectified အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်သည်ဤရလဒ်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ non-objectified အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားလူ့ပစ်မှတ်အညီအမျှနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရုပ်ကဲ့သို့အရာဝတ္ထုကနေမတူညီခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သည်အလားတူသူတို့ objectified နှင့် Non-objectified ရုပ်တူသောယောက်ျားနှင့် Non-objectified ရုပ်တူသောမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှိုင်းယှဉ် objectified အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုအစုတခုအကြားထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောအခါရုပ်တူသောအမျိုးသမီးတ္ထုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်ဖေါ်ပြခြင်းသင်တန်းသားများကို '' အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတွင်ထင်ဟပ် သူတို့ရဲ့လူ့ counterparts တွေကိုအကြားထင်ရှားသောတ္ထု။ စမ်းသပ်မှု3၏ရလာဒ်ကိုလူ့-object ကိုသွေးခွဲရန်မ semantic ရည်ညွှန်းသည်ပင်လျှင်, objectified အမျိုးသမီးတွေပါသေးတ္ထုကိုပိုမိုဆင်တူအဖြစ်ကိုရိပ်မိဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အဆုံးစွန်သောအမှု၌အဘယ်သူမျှမ oddball အကျိုးသက်ရောက်မှုကလူမဆိုလမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည့်အမျိုးသမီးလူ့နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအရုပ်ကဲ့သို့အရာဝတ္ထုအသေးစိတ်ရှင်းပြမပြုခဲ့ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုသာယခင်စမ်းသပ်ချက်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးထက်ပို posterior ဒေသနှင့်တစ်ဦးပိုမိုတိုတောင်း Post-လှုံ့ဆော်မှုအချိန်ပြတင်းပေါက်၌တွေ့သောဝန်ခံရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်တာဝန်လိုအပ်ချက်များကိုအဆိုပါ P300 ၏အောင်းနေချိန်ကိုပြောင်းလဲကြောင်းလူသိများသည်41 နှင့်စမ်းသပ်မှု3၏လုပ်ငန်းတာဝန် (အနည်းငယ်ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်ပြသMဟုတ်မှန်ရေး = ၈၂%) ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (Mဟုတ်မှန်ရေး = အသီးသီးစမ်းသပ်မှု 89.6 နှင့် 89.3 များအတွက် 1% နှင့် 2%) ။ ထို့အပြင် P300 အစိတ်အပိုင်းသည်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, အယူအဆကနေအရောင်အပေါ်အခြေခံပြီးလက်ရှိတာဝန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြုတ်ချမလွှဲမရှောင်တစ်ခုတည်း ROI မှအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့။ ၀ န်ဆောင်မှုခံထားရသောနေရာတွင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်အဓိကထားသင့်သည်ကိုလက်ရှိအချိန်တွင်မသိရသေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ (ထိုကဲ့သို့သောပုံစံတောက်ပသို့မဟုတ်ဆနျ့ကငျြဘကဲ့သို့) အာရုံခံ parameters တွေကိုအတွက်မူကွဲတွေနဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါလှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်သုတေသန (ဥပမာ44) ထိုသို့သောမူကွဲအစောပိုင်း ERP တုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော P200 နှင့် N1 အဖြစ် (ဆိုလိုသည်မှာ 1 အတွင်း ms Post-လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်း,) အပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ရှိသည်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်လက်ရှိရလဒ်များအစောပိုင်းအချိန်-window တွင်လက်ရှိလှုံ့ဆော်မှုများအကြားခြားနားချက်များညွှန်ပြခဲ့ပါဘူး။ ဤ Bottom-Up သိမှုဆိုင်ရာအာရုံဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှမဆိုလို။ ဤရလဒ်မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ကျား၏ညီတူညီမျှကန့်ကွက်-ကဲ့သို့အားလုံးစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ရသောကျွန်ုပ်တို့၏ Pre-စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုနှင့်အညီ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်, သောသိမှုဆိုင်ရာအာရုံကိုသိုထားခဲ့ကြသည်လမျး၌ဖြစ်ပါသည် သူတို့ရဲ့လူ့မူရင်းဖို့တတ်နိုင်သလောက်အလားတူ။ ထို့အပြင်သာနောက်ပိုင်းအချိန်ပြတင်းပေါက်အတွက်မျှော်မှန်းအပြန်အလှန်ရှာဖွေတာကျွန်တော်တို့ကိုအထက်မှအောက်သို့ဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍကစားကောက်ချက်ချဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရလဒ်များခြုံငုံပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုလိင်၏သင်တန်းသားများကိုမှားယှငျးစှာတူညီအတိုင်းအတာအထိ objectified ယောက်ျားထက်စစ်မှန်တဲ့တ္ထုမှအမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုဆင်တူ objectified ရိပ်မိကြောင်းအကြံပြုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများအဘို့အညီအမျှအားကောင်းတဲ့ခဲ့ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဤဒေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူမ၏ထုတ်ဖော်အဝတ်အစားသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကိုယ်ဟန်အနေအထားကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး objectified သောအခါသောအယူအဆကိုထောကျပံ့45သူမကတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အရာဝတ္ထုအလားတူအဖြစ်ကိုရိပ်မိပါလိမ့်မည်။
ဤရလဒ်သည်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုသိပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ချိုးဖောက်မှုနဲ့တူပုံမှန်အားတ္ထုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်လေ့လာကြသည်ကုသမှု, တရားမျှတစေခြင်းငှါ,46။ ဒုတိယအချက်မှာအမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေထဲကနေမတူညီသောတွေ့ရှိချက်မီဒီယာသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့သောမှုများထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလိုစေခြင်းငှါ,6 Hyper-ပုလ်ကို virtual ကိုယ်စားပြုနှိုင်းယှဉ်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌အားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုတိုက်ရိုက်ဒီစိတ်ကူးကိုစမ်းသပ်ထားပြီးနေစဉ်, သွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်-ရိုက်နှိပ်ဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်ထိတွေ့နေသောယောက်ျား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်နေတဲ့ Real-ဘဝကိုဥပမာအားဖြင့်အဘို့မိမိတို့သည်းခံစိတ်တိုးပွားလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်47 နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသောအခါအမျိုးသမီးပစ်မှတ်နှောင့်ယှက် sexually ၎င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်48။ တတိယအချက်လက်ရှိပါရာဒိုင်းအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားအခင်းအကျင်းအတွက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ objectification သို့မဟုတ် race- သို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ-based လူဇာတ်ဖျက်ခြင်း) objectification နှင့်လူဇာတ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုတိုင်းတာရန်မွေးစားခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ ရို, အသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်တင်စားထားတဲ့အစီအမံများသာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြုလုပ် objectified သို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေပစ်မှတ်မဟုတ်ဘဲရုံလျော့နည်းအသိဉာဏ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပြောင်းလဲအဖြစ် stereotyped ခံထက်အနှစ်သာရပြောင်းလဲဆိုကြသည်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နေဆဲ49။ တိုက်ရိုက်လူ့နဲ့ Non-လူ့အဖွဲ့အစည်းများကွဲပြားခြားနားရိပ်မိနေကြခြင်းရှိမရှိတိုင်းတာသောလက်ရှိပါရာဒိုင်းချမှတ်သည့်ဥပစာကျော်လွန်ပြီးလူဇာတ်ဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သက်သေသာဓကများကိုပေလိမ့်မည်။
နမူနာအရွယ်အစားဟာအာဏာကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (ηp2 ) 0.504 ထံမှ 0.709 အထိ အသုံးပြု. ယခင်အလုပ်အစီရင်ခံခဲ့40 အလားတူအတွင်း-သင်တန်းသားများကိုဒီဇိုင်းလတ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ oddball ပါရာဒိုင်း, အစားကြီးမားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလက်ရှိလေ့လာမှုများအဘို့အအစီရင်ခံတစ်ဝက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကိုမျှော်လင့်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သလိုပဲ။ တစ်ဦးကအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (PANGEA50) 16 ပါဝင်သူတစ်နမူနာ 0.825 တစ်တန်ခိုးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု detect လုပ်ဖို့လုံလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သတစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုမှာ 20-25 သင်တန်းသားများကိုလှည့်ပတ်စုဆောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 မှာတော့နှစ်ဆယ်သုံးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုပုံမှန်ရှိခဲ့သို့မဟုတ်သာမန်ရူပါရုံတညျ့နှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းမရှိသမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ကွဲဖြစ်ညွှန်ပြသူကိုသာပါဝင်သူသုံးလိင်တူဆက်ဆံသူသင်တန်းသားများကို၏ထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, နမူနာများတွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကိုထပ်မံသင်တန်းသားများကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ EEG အပိုငျးအ (25% ကျော်လွန်) ၏တစ်ဦးအလွန်အကျွံမှုနှုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟာအလွန်ဆင်းရဲသောသူကို signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးအစား၏စမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း 18 အမျိုးသမီး (8 ပါဝင်သူများ၏အချက်အလက်ပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, Mအသက်အရွယ် = 20.66, SD = 1.29) ။ လေ့လာမှုအားလုံး၏နည်းလမ်းများကို“ Comitato Etico per la sperimentazione con l'essere umano” မှအတည်ပြုထားသောစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ protocol (2016-004) နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အသိပေးသဘောတူညီချက်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာအားလုံးသင်တန်းသားများကိုထံမှရရှိသောခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အသံမှေးမှိန်စေသော၊ သင်တန်းသားများကိုတက်ရောက်သူများ၏ရှေ့မှောက်၌ထားရှိသော ၂၃.၆ လက်မအရောင်မော်နီတာ (80 × 23.6, 1920 Hz) မှ ၈၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ လှုံ့ဆော်မှုများကို MATLAB Psychotoolbox မှထုတ်လုပ်သည်။
အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြု 82 လှုံ့ဆော်မှု, 42 (21 အမျိုးသမီး objectified နှင့် 21 အမျိုးသမီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားပစ်မှတ်ပုံနဲ့တူတဲ့) နှင့် 40 အထီး 20 အထီး objectified နှင့် 21 အထီးအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားပစ်မှတ်ပုံနဲ့တူတဲ့ (ရှိကြ၏ပုံကိုကြည့်ပါ 1) ။ အားလုံးဓာတ်ပုံများကို၏ရှုထောင် 5.35 ° 7.64 °×ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုဟာမော်နီတာ၏ဗဟိုအောက်တွင်နှင့်မျက်နှာပြင်၏အလယ်ဗဟိုမှာတစ်ပုံစံတည်းမီးခိုးရောင်နောက်ခံပေါ်တွင် 2.67 °တင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်မျက်နှာပြင်၏ဗဟိုအထက် 1.91 °တည်ရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မကြာခဏလှုံ့ဆော်မှု (objectified လူ့ပစ်မှတ်) ၏ sequence ကိုအတွင်းကာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု (ရုပ်တူသောကိုယ်ပွား) ၏ရှေ့တော်မှောက်ပါဝင်သည့် oddball ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြု41။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံအဓိကသတင်းစာအားဖွငျ့, တစ်ရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားတစ်ခုသို့မဟုတ်လူ့ပစ်မှတ်ဖြစ်စေပုံဖော်ရှိမရှိအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းတတ်နိုင်သမျှတိကျစွာညွှန်ပြခြင်းနှင့်ခဲ့ရတယ်ထားတဲ့အတွက်အမျိုးအစားတာဝန်, လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များအကြားတစ်ဦးကိုကျပန်းအမိန့်နှင့်အတူလေးလုပ်ကွက်၌ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်: ကျန်ရှိနေသေးသောနှစ်ခုလုပ်ကွက်အထီးလူ့ခြင်းနှင့်ရုပ်တူသောပစ်မှတ်ပါဝင်သည်စဉ်နှစ်ခုကိုလုပ်ကွက်, လူ့ခြင်းနှင့်ရုပ်တူသောမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ်ပါရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု 250 လှုံ့ဆော်မှု (80% မကြာခဏလှုံ့ဆော်မှုနှင့် 20% ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလှုံ့ဆော်မှု) ပါဝင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် objectified လူ့ပစ်မှတ်၏ထပ်တလဲလဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပာ၏တင်ဆက်မှုကွာခဏကအနည်းဆုံးနှစ်ခုမကြာခဏလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောတဦးတည်းမတိုင်မီတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသောသတ်နှင့်အတူအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်ပွားပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ deviant နှိုးဆွခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး 1500 ms တင်ဆက်မှု fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် (+) 1.91 မျက်နှာပြင်၏ဗဟိုအထက်°နှင့်အတူတစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုလုပ်သည်အထိထို့နောက်လှုံ့ဆော်မှုမျက်နှာပြင်ပေါ်ကျန်ရစ်၏။
နှစ်ဆယ်နှစ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းစမ်းသပ်မှု2အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုပုံမှန်ရှိခဲ့သို့မဟုတ်သာမန်ရူပါရုံတညျ့နှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းမရှိသမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ရိုးရိုးဖြစ်ညွှန်ပြတဲ့သူတဦးတည်းပါဝင်သူမှဒေတာ, နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုကနေစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ EEG signal ကိုအများအပြားအပိုငျးအ (25% ကျော်လွန်) ကညစ်ညမ်းကြောင့်အပြင်နှစ်ခုသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် 18 ပါဝင်သူ (8 အမျိုးသမီး, Mအသက်အရွယ် = 22.97, SD = 2.24) နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
အဆိုပါယန္တရားစမ်းသပ်မှု 1 များတွင်အသုံးပြုကြောင်းမှတူညီခဲ့သည်။ အဆိုပါ 82 လှုံ့ဆော်မှုယခု Non-objectified ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပစ်မှတ် (ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အဝ-အဝတ်ကိုဝတ်သောတစ်ဦးချင်းစီ) နှင့်၎င်းတို့၏ညီမျှသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ non-objectified လှုံ့ဆော်မှုများတွင်လျော့နည်းအသားအရေအရှင် 1 စမ်းသပ်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူတာဝန်ကပိုခက်ခဲမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, task ကိုအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအရွယ်အစား (1 °လှုံ့ဆော်မှုစင်တာထံမှ 8.02 °×) ကိုတိုးမြှင့် 11.46 စမ်းသပ်ဖို့အလားတူခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်ဟာမော်နီတာ၏ဗဟိုအထက်4°သည်ထင်ရှားစဉ်အားလုံးဓာတ်ပုံများကို၏ဗဟိုသည်မျက်နှာပြင်၏အလယ်ပိုင်းကိုအောက်မှာ 2.29 °တည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျနော်တို့စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်အသုံးပြုတဲ့တစ်ဦးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်ကိုးသင်တန်းသားများကိုသင်တန်းခရက်ဒစ်အဘို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက် 10 € paid ဖြစ်စေစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုပုံမှန်ရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရူပါရုံကိုနှင့်အာရုံကြောရောဂါမျှသမိုင်းတညျ့။9သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ဒေတာများ (5 သင်တန်းသားများကို Non-လိင်ကွဲဖြစ်ညွှန်ပြ,3သင်တန်းသားများကို 25% အမှားအယွင်းများထက်ပို လုပ်. , 1 ပါဝင်သူထားပြီးစမ်းသပ်မှုများ၏ပစ်မှတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ခဲ့) နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုကနေစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးနမူနာ 20 ပါဝင်သူ (10 ယောက်ျားကိုပါဝင်သည်; Mအသက်အရွယ် = 21.2, SD = 2.08) ။
စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သူများကဲ့သို့တူညီသောဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးအဝါရောင် (227-40-30 RGB) ဖြည့်စွက်အဆင်ပြေအောင်သို့မဟုတ်ညာဘက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လက်ဝဲဘက်မှာအစိမ်းရောင် (112-235-44 RGB) ပုံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပုံ၏ရှုထောင် 0,3 မီလီမီတာကြီးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအရောင်များ၏အရောင်အဝါဂိုးခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံ၏နောက်ခံအရောင်ပုံကိုမဆိုဘောင်မပါဘဲသည်ထင်ရှားဒီလမ်းအတွက်, မျက်နှာပြင်၏ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်အဆိုပါမကြာခဏနှင့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလှုံ့ဆော်မှုပုံ၏ပုံ၏အရောင်များ၏အခြေခံပေါ်မှာမတူညီခဲ့ကြပြီးသော့ကိုစာနယ်ဇင်းအားဖွငျ့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမကြာခဏအရောင်လူ့ပစ်မှတ်မှလျှောက်ထားနေစဉ်အများဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအရောင်, အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အတူတွဲခဲ့သည်။ လေးစမ်းသပ်လုပ်ကွက်ပစ်မှတ်နှင့် (အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်) ကိုမကြာခဏအရောင်များ၏ကျား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားကြောင်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု 250 ပုံမှန်အစည်းအဝေးလှုံ့ဆော်မှု (80% မကြာခဏပစ်မှတ်နှင့် 20% ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပစ်မှတ်) နှင့် 25 ဖမ်းစမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ အဆိုပါဖမ်းစမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးသင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှစ်ဆအမျိုးအစားစံနှုန်းကို အသုံးပြု. လှုံ့ဆော်မှုခွဲခြားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖန်တီးထားကြသည်။ (20 စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်) လူ့ပစ်မှတ်နှင့်အတူခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအရောင်အနေဖြင့်ထိုအစမ်းသပ်မှုတွေမှာမကြာခဏအရောင်, (5 စမ်းသပ်မှုတွေမှာ) အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အတူလိုက်ဖက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖမ်းစမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင် EEG တစ်ဦးလက်ျာနားပျဉ်းရည်ညွှန်း (:; A / D ကိုမှုနှုန်း 25-0.01 Hz: 200 Hz bandpass filter ကို) နှင့်အတူ, 1000 လျှပ်နှင့်အတူဦးရေပြားနှင့်လက်ဝဲဘက်နားပျဉ်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကနေမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း impedance5KΩအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် EEGLAB သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့သည်51 နှင့် ERPLAB Toolbox52။ ကုန်ကြမ်းဒေတာဒီဂျစ်တယ် 0.1-40 Hz တစ် bandpass filter ကိုအတူ filtered ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ EEG data တွေကိုလက်ျာနှင့်လက်ဝဲဘက်နားပျဉ်းလျှပ်၏ပျမ်းမျှအော့ဖ်လိုင်း re-ကိုးကားခဲ့သည်။ အဆိုပါအလျားလိုက် electrooculogram (HEOG) နှစ်ဦးစလုံးမျက်စိပြင် canthi အပေါ်ထားရှိနှစ်ခုလျှပ်ထံမှမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ signal ကိုကြိုတင်စမ်းသပ်စတင်ခြင်းမှ 900 ms စတင်ခဲ့ကြောင်း 100ms-ရှည်လျားယုဂ်အတွက် segmented ခဲ့သည်။ baseline ဆုံးမခြင်းဟာ 100 ms Pre-လှုံ့ဆော်မှုကြားကာလအတွင်းယုတ်လှုပ်ရှားမှုသုံးပြီးလျှောက်ထားခဲ့သည်။ အလျားလိုက်မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု (HEOG ± 30 μVကျော်လွန်) များသို့မဟုတ်အခြားလှုပ်ရှားမှုအပိုငျးအ (± 70 μVကျော်လွန်ဆိုချန်နယ်) ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားစမ်းသပ်မှုတွေ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအရေအတွက်ကို 85% ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများအတွက် ERP ပျမ်းမျှတစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေအဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာအကျိုးစီးပွားသုံးခုကွဲကွာဒေသများ (Roi) တွင် channel များကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှပြီးနောက် ERPs ကစာရင်းအင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်: ဗဟို (လျှပ် Cz, C3, C4); parietal နှင့် occipital (လျှပ် Oz, O3 နှင့် O4) (Pz, P1, P2 လျှပ်စစ်အ) ။
အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS software ကိုသုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများယုတ်ရာခိုင်နှုန်းများအတွက်ယုတ်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်း-ပါဝင်သူ ANOVA (အမျိုးသမီး vs. အထီး) ပစ်မှတ်ကျား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် (ရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံ vs. လူ့) တစ်ဦးက Two-လမ်းတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုများအတွက်သီးခြားကောက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို '' ကျားအကျိုးစီးပွား၏အခြား variable တွေကိုနှင့်အတူမည်သည့်အဓိကသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်ဘယ်တော့မှကြောင်းပေးထားခြင်း, variable ကိုအဆိုပါစမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အားလုံးအစီရင်ခံရလဒ်များကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကိုင်ထားပါ။
တစ်ဦးချင်းစီရွယ်များအတွက် P3 များအတွက်အချိန်ကြားကာလများကိုတွက်ချက်ရန်ကျွန်တော်တစ်ဦး data တွေကိုမောင်းနှင်ချဉ်းကပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။2×: (အမျိုးသမီး vs. အထီးကျားမရှိစေရေး) (လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်: လူ့အရုပ်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုပုံ vs. ) ပထမဦးစွာကျနော်တို့မျိုးစုံ2ကောက်ယူရေးလှုံ့ဆော်စတင်ခြင်းကနေစတင် 20 ms အချိန်ပြတင်းပေါက်အပေါ်အတွင်း-ပါဝင်သူ ANOVAs နှင့်ပြတင်းပေါက်များအရာများအတွက်အပြန်အလှန်အချိန်ကိုမရွေး ပစ်မှတ်ကျား, မများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တို့အကြား (တွေ့မြင် (ဆိုလိုသည်မှာ5ms) ကအနည်းဆုံး 100 ဆက်တိုက်ပြတင်းပေါက်ဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကျန်ရစ်53 အလားတူချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးပြုမှုသည်။ ဤရလဒ်များ၏အခြေခံအားဖြင့်အဓိက ANOVA များကို ROI တစ်ခုချင်းစီအတွက်အောက်ပါအချိန်ကာလများ၌သီးခြားစီပြုလုပ်ခဲ့သည် - ၄၀၀ မှ ၅၈၀ မိုင်အလယ်ပိုင်း၊ ၃၆၀ မှ ၆၀၀ မိုင် parietal နှင့်သက္ကရာဇ် ၃၆၀ မှ ၆၀၀ မိုင်ခွဲခြားထားသည်။ အားလုံးကုန်ကြမ်းဒေတာကိုအများပြည်သူ repository ကိုတွင်ရရှိနိုင်လုပ်နေကြသည် (https://osf.io/ejhmf/?view_only=734f9ae8f6884802b13cf461a535f60d).
Mitchell, JP, Heatherton, TF & Macrae, CN ထူးခြားသောအာရုံကြောစနစ်များသည်လူနှင့်အရာဝတ္ထုဆိုင်ရာအသိပညာကိုစောင့်ကြည့်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 99(23), 15238-15243 (2002) ။
Bartky, SL ဣတ္နှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုဖိနှိပ်မှု၏ phenomenology လေ့လာစရာများ (စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း, 1990) ။
Fredrickson, BL & Roberts သည်, TA Objectification သီအိုရီ။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 21(2), 173-206 (1997) ။
အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်ဘဝအသက်တာတွင်လိင်ဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှု - စမတ်ဖုန်းဂေဟဗေဒဆိုင်ရာခဏတာလေ့လာဆန်းစစ်မှုလေ့လာမှု။ br ။ ဂျေ Soc ။ Psychol ။ 56(2), 314-333 (2017) ။
အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး, မိန်းကလေးများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယား Task Force ၏အစီရင်ခံစာ။ မှရယူရန်, http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf (2007) ။
ရပ်ကွက်, ML မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 ။ ဂျေလိင် Res ။ 53(4-5), 560–577 (2016).
Aubrey, JS လိင်အနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-သဘောထားအမြင်အပေါ်မီဒီယာထိတွေ့ objectifying ၏သက်ရောက်မှု: ခန္ဓာကိုယ် Self-ဝိညာဏ်၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေး။ mass Community ။ Soc ။ 10(1), 1-23 (2007) ။
Calogero, RM objectification သီအိုရီ၏တစ်ဦးကစမ်းသပ်: ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးသမီးအသွင်အပြင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်အထီးအကြည့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 28(1), 16-21 (2004) ။
Calogero, RM, Tantleff-Dunn, S. & Thompson, JK အကြောင်းရင်းများ: အမျိုးသမီးတွေအတွက် self-objectification, အကျိုးဆက်များ, နှင့်တန်ပြန်တုန် (အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်း 2011) ။
Grabe, S. , Hyde, JS & Lindberg, SM ခန္ဓာကိုယ်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ ကျား၊ မ၊ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 31(2), 164-175 (2007) ။
ရေကူးဝတ်စုံဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် Fredrickson, BL, Roberts, T.-A. , Noll, SM, Quinn, DM & Twenge, JM - သင်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိင်အကန့်အသတ်ဖြင့်စားခြင်း၊ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 75(1), 269 (1998) ။
Tiggemann, M. & Williams, E. အမျိုးသမီးများအကြားမသန်မစွမ်းဖြစ်သည့်အစားအစာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္: ။ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 36(1), 66-75 (2012) ။
Loughnan, S. , Pina, အေ, Vasquez, EA & Puvia, အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များသည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုခံရသူများ၏အပြစ်ကိုပိုမိုတိုးပွားစေပြီး၊ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 37(4), 455-461 (2013) ။
Pacilli, MG et al။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားသည်းခံခြင်း၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှတဆင့်ရင်းနှီးမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးသားကောင်များဆီသို့ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်တွေကူညီပေးနေလျော့နည်းစေသည်။ br ။ ဂျေ Soc ။ Psychol ။ 56(2), 293-313 (2017) ။
Rudman, LA & Mescher, K. တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အရာဝတ္ထုများ - အမျိုးသမီးများအားအမျိုးသားများသွယ်ဝိုက်သောလူမဆန်စွာဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ။ Pers ။ Soc ။ psyche ။ ခ 38(6), 734-746 (2012) ။
လူ့အိမ်ထောင်ဖက်ဦးစားပေးများတွင် Buss, DM လိင်ကွဲပြားမှု: 37 ယဉ်ကျေးမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယူဆချက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 12(1), 1-14 (1989) ။
Singh ကအမျိုးသမီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ဃအလိုက်အရေးပါမှု: ခါး-to-တင်ပါးအချိုး၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 65(2), 293 (1993) ။
Eagly, AH & Wood, W. လူ့အပြုအမူတွင်လိင်ကွဲပြားမှု၏ရင်းမြစ်များ။ နံနက်။ psychol ။ 54(6), 408 (1999) ။
Jeffreys, S. အလှအပနှင့် misogyny: အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအန္တရာယ်ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အကျင့် (Routledge, 2014) ။
Harris, LT & Fiske, ST နိမ့်ကျမှုအနိမ့်ဆုံးလူသားဖြစ်ခြင်း - အစွန်းရောက်သောအုပ်စုများအတွက် Neuroimaging တုံ့ပြန်မှု။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 17(10), 847-853 (2006) ။
Harris, LT & Fiske, ST လူမှုရေးအုပ်စုများသည်ရွံရှာဖွယ်ရာများကိုထုတ်ပေးသော mPFC တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ 2(1), 45-51 (2007) ။
Gazzola, V. , Rizzolatti, G. , Wicker, B. & Keysers, C. The anthropomorphic ဦး နှောက်။ ။ မှန်အာရုံခံဆဲလ်သည်လူနှင့်စက်ရုပ်လုပ်ရပ်များကိုတုံ့ပြန်သည်။ Neuroimage 35(4), 1674-1684 (2007) ။
Krach, အက်စ် et al။ စက်တွေထင်နိုင်သလား? fMRI မှတဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးစက်ရုပ်နှင့်အတူတာ Interaction နှင့်ရှုထောင့်။ PLoS တစ်ခုမှာ 3(7), e2597 (2008) ။
Vaes, ဂျေ, Meconi, အက်ဖ်, Sessa, P. & Olechowski, အမ်အနည်းဆုံးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တွေကို non- လူ့အဖွဲ့အစည်းများဆီသို့ ဦး တည်အာရုံကြောစာနာမှုတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်။ Neuropsychologia 89, 132-140 (2016) ။
Waytz, အေ et al။ sentient အောင်နေဖြင့်အသိ Making: ထိရောက်သောလှုံ့ဆျောမှုနတ်ဘုရားတိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 99(3), 410 (2010) ။
Heflick, NA & Goldenberg, JL Objectifying Sarah Palin: သက်သေပြခြင်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ လူ့စွမ်းရည်အားနည်းသောအထောက်အထားများဖြစ်စေသည်ဟူသောအထောက်အထား။ ဂျေ Exp ။ Soc ။ Psychol ။ 45(3), 598-601 (2009) ။
Loughnan, အက်စ် et al။ Objectification depersonalization မှဦးဆောင်: objectified အခြားသူများကိုရန်စိတ်ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Soc ။ Psychol ။ 40(5), 709-717 (2010) ။
Vaes, ဂျေ, Paladino, P. & Puvia, အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြားလူသားတွေပြီးပြည့်စုံသောပါသလား အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်အမျိုးသမီးများကိုလူမဆန်စွာပြုခြင်းသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Soc ။ Psychol ။ 41(6), 774-785 (2011) ။
Heflick, NA, Goldenberg, JL, Cooper, DP & Puvia, E. အမျိုးသမီးများမှအရာဝတ္ထုများသို့ - အသွင်အပြင်အာရုံ၊ လိင်အမျိုးအစားနှင့်နွေးထွေးမှု၊ ဂျေ Exp ။ Soc ။ Psychol ။ 47(3), 572-581 (2011) ။
Cikara, M. , Eberhardt, JL & Fiske, ST ။ အေးဂျင့်များမှသည်အရာဝတ္ထုများအထိ - လိင်အရသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ်မှတ်များအားအာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 23(3), 540-551 (2011) ။
ရိဒ်, CL, ကျောက်, VE, Bozova, အက်စ် & Tanaka, ဂျေအဆိုပါခန္ဓာကိုယ် - ပြောင်းပြန်လှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 14(4), 302-308 (2003) ။
Reed, CL, Stone, VE, Grubb, JD & McGoldrick, JE ဇောက်ထိုးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ: အပိုင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုယ်ဟန်အနေအထား။ ဂျေ Exp ။ Psychol. -Hum ။ အမြင်။ 32(1), 73-87 (2006) ။
လူတစ် ဦး အသိအမှတ်ပြုမှုနှိုင်းယှဉ်အရာဝတ္ထုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ပေါင်းစပ်: Bernard, P. , Gervais, SJ, Allen က, ဂျေ, Campomizzi, အက်စ် & Klein, O. : လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ခန္ဓာကိုယ် - ပြောင်းပြန်လှန်ယူဆချက်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 23(5), 469-471 (2012) ။
Cogoni, C, et al။ asymmetry နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍ: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြန်လှန်အယူအဆနောက်ကွယ်မှယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ PLoS တစ်ခုမှာ 13(4) (2018) ။
Tarr, MJ အမြင်ဒီတော့ရိုးရှင်းသောမဟုတ်ပါဘူး: ဘား, Gervais, Allen က, Campomizzi နှင့် Klein (2012) အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 24(6), 1069-1070 (2013) ။
Volkow, ND, Wang, GJ & Baler, RD Reward, dopamine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - အဝလွန်ခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 15(1), 37-46 (2011) ။
ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ပေါင်းလဒ်ထက်မပိုဖြစ်လာသည့်အခါ Bernard, P. , အကြောင်းအရာ, ဂျေ, Deltenre, P. & Colin, C. : နဂိုအတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလောင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်အလျင်အမြန်စေလွှတ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Neuroreport 29(1), 48-53 (2018) ။
ဘားနတ်, P. et al။ သိမြင်မှု objectification များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Soc ။ Psychol ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး။ သိပ္ပံ။ 9(5), 550-559 (2018) ။
ဦး နှောက်အပေါ် Ito, TA & Urland, GR လူမျိုးနှင့်ကျား၊ မ - မျိုးစုံခွဲခြားနိုင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူမျိုးနှင့်ကျား၊ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 85(4), 616 (2003) ။
Tomelleri, S. & Castelli, L. ကျားအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသဘောသဘာဝ။ Soc ။ Psychol ။ 43, 14-27 (2011) ။
Picton, လူ့အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ TW အဆိုပါ P300 လှိုင်း။ ဂျေ Clin ။ Neurophysiol ။ 9(4), 456-479 (1992) ။
Donchin, E. & Coles, MG P300 အစိတ်အပိုင်းသည်အခြေအနေအသစ်မွမ်းမံခြင်း၏သရုပ်သလား။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 11(3), 357-374 (1988) ။
အာမုန်ရောထွေး-ကျားအုပ်စုများအတွက် MJ Visual အာရုံစိုကျ။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 5, 1569 (2015) ။
အစောပိုင်းအမြင်အာရုံပြုပြင်ခြင်းအပေါ် Johannes, S. , Münte, TF, Heinze, HJ & Mangun, GR Luminance နှင့် Spatial အာရုံစူးစိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ သိမြင်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2(3), 189-205 (1995) ။
ဘားနတ်, P. et al။ အဝတ်အစားထုတ်ဖော်အရာဝတ္ထုစေပါဘူး: ERP သိမြင် objectification ကိုယ်ဟန်အနေအထားအကြံပြုချက်များအားဖြင့်မဟုတ်, အဝတ်အစားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ Pers ။ Soc ။ psyche ။ ခ 45(1), 16-36 (2019) ။
Nussbaum, MC လိင်နှင့်လူမှုအတွက် Objectification တရားစီရင်ရေး (ed. Nussbaum, M.C.) 213-239 (အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, 1999) ။
Dill, KE, Brown, BP & Collins, လိင်စော်ကားမှုကိုသည်းခံခြင်းအပေါ်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များနှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဂျေ Exp ။ Soc ။ Psychol ။ 44(5), 1402-1408 (2008) ။
Yao, MZ, Mahood, C. & Linz, Sex လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်ခြင်း၊ ကျား၊ မရေးရာပုံစံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုဖြစ်နိုင်ချေ - လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၏သိမြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 62(1-2), 77–88 (2010).
Smith က DL လူ့သန်းလျော့နည်း: ကျနော်တို့သိက္ခာအဘယ်ကြောင့်, ကျွန်ခံ, နှင့်အခြားသူများဆီး (စိန့်မာတင်စာနယ်ဇင်း, 2011) ။
Westfall, ဂျေ PANGEA: ယေဘုယျ anova ဒီဇိုင်းအဘို့ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အတည်မပြုရသေးသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မှာရရှိနိုင်, http://jakewestfall.org/publications/pangea.pdf (2016)
Delorme, A. & Makeig, S. EEGLAB: လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပါအဝင် Single-trial EEG ဒိုင်းနမစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် open source toolbox ။ ဂျေ neuroscience ။ နည်းလမ်းများ 134(9-21), 9–21 (2004).
Lopez-Calderon, J. & Luck, SJ ERPLAB: အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလားအလာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် open-source toolbox ။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience ။ 8(213), 213 (2014) ။
Jost, K. , Bryck, RL, Vogel, EK & Mayr, U. အမြင်အာရုံအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက် filtering ကိုထိရောက်မှုနှင့်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဦးနှောက် Cortex 21(5), 1147-1154 (2010) ။
စိတ်ပညာဌာနနှင့်သိမှုသိပ္ပံ, Trento တက္ကသိုလ် Trento, အီတလီ
စိတ် / ဦးနှောက်သိပ္ပံ, Trento, Trento တက္ကသိုလ်, အီတလီစင်တာ
စမ်းသပ်စိတ်ပညာဌာန, ဂျန့်မြို့မှာဂျန့်မြို့မှာတက္ကသိုလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ဖက်စပ်နှင့် VM ကပဋိသန္ဓေနှင့်သုတေသနဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ GC နှင့် DR စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2၏ဒေတာစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ DR နှင့် CC ကိုစမ်းသပ်မှု3၏ဒေတာစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဖက်စပ်, GC, DR နှင့် CC ကိုစက္ကူရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများစက္ကူ၏နောက်ဆုံး version ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
စာပေးစာယူမှ Jeroen Vaes.